Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Horumarkii Gumaysigu Ku Sheegayay Ogadenya Ma Heerkaasuu Marayaa?
Faallo: Horumarkii Gumaysigu Ku Sheegayay Ogadenya Ma Heerkaasuu Marayaa?
Shacabka Soomaaliyeed ee Geeska Africa ku dhaqan waxay in badan shaashada Gumaysiga ka daawadeen muuqaalo been abuur iyo hafar iskugu jira oo lagu sheegayo in Ogadenya ay horumar iyo barwaaqo ka jirto.
Dadka qaar baa mala-awaalka iyo riwaayada noocaas ah run u qaatay, balse inta badan ummada Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee waxay ka dharagsan tahay khayaamada Gumaysiga Itoobiya iyo wakiiladiisa aan damiirka iyo iimaanka toona lahayn ee ka dhanka ah shacabka Soomaalida Ogadenya ee Gumaysigu ragaadiyay.
Sida laga wada dheehday baraha Gumaysigu ku faafiyo dacaayadiisa raqiiska ah waxay soo ban dhigeen muuqaalo kala duwan oo tilmaamaya in shacabka Soomaaliyeed ee Gumaysiga Itoobiya ku hoos dulman ay haystaan horumar balaadhan oo dhan kasta leh.
Hadaba waxaan idiin haynaa muuqaaladii dhabta ahaa oo muujinaya silica iyo saxariirka uu kujiro shacabka Soomaalida Ogadenya. Abaaraha iyo cudurada kala gaabiyay shacabka Soomaalida Ogadenya ayaa waxaa sababay cadaadiska iyo cuna-qabataynta joogtada ah ee Woyaanaha iyo wakiiladoodu ay shacabka ku hayaan.
Hadaba muuqaaladan hoose indhahaada kaga boggo.